Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi | I-DD Fasteners Trading Co, Ltd.
DD FASTENERS kuphinde kwamukelwa isitifiketi se-ISO 9001 nokusebenza kwefektri okwenziwa ngokuya nge-6S standard. DD FASTENERS athobela zombili i-DIN namazinga wamazwe omhlaba, ukuhlinzeka ngemikhiqizo ephelele yemikhiqizo.
Okokusebenza kwe-anti-corrosion kubambisene nobuchwepheshe baseJalimane, ukuvikelwa kwemvelo, i-anti-acid, umswakama kanye nokuphikisa okushisayo, imibala ehlukile, ukuhlolwa kwe-salt-spray sekufinyelelwe emahoreni angama-3,000.
Iziqobelo ze-DD ine-systerm yokulawula ezenzakalelayo kusuka ezintweni ezingavuthiwe iye kumikhiqizo eqediwe futhi ifakwe imishini ephelele yokuhlola ikhwalithi.
DD FATENERS futhi kuthatha isikhundla esiphambili esihlome nge-rotary side Vickers, umshini wobulukhuni be-digital, i-Rockware apparatus, umshini wokuhlola oyinkimbinkimbi, umshini wokusika isampula we-ironlographic, umshini wokukhipha isivinini wokushaya umshini, umshini wokulinganisa isithombe, umshini wokuhlola okhipha nosawoti wokuhlolwa kwensimbi igumbi kanye nomshini we-electroplated njll.